Guangzhou Naiwei Robhoti Technology Co, Ltd.
KN95 semiauto earloop yekutengesa muchina
KN95 yekumhanyisa yakazara otomatiki masiki muchina
KF94 mask muchina
Kwakavharwa nenyama earloop chifukidzo muchina
Imwe yekudhonza imwe servo mota yekunze earloop otomatiki mask muchina
Imwe yekudhonza imwe servo mota yemukati earloop otomatiki mask muchina
Semiauto servo mota earloop yekutengesa muchina
Yekumhanyisa servo mota maski muviri yekucheka muchina
Chinyorwa mashandiro earloop yekutengesa muchina
Ultrasonic yemasikisi muchina
Zvemari mapakeji anowanikwa
Imwe kudhonza imwe servo mota yemukati earloop otomatiki mas ...
Imwe kudhonza imwe servo mota yekunze earloop otomatiki mas ...
KF94 (willow leaf type) mask otomatiki muchina muchina wakazara otomatiki wekugadzirwa kweKF94 masks. Iyo inoshandisa ultrasonic tekinoroji kusunga PP isina-yakarukwa machira uye firita dura zvinhu, uye cheka iyo yakapetwa mask mask muviri maererano neyakagadzirwa zvigadzirwa zvinoshandiswa. Iyo masiki inogona kusvika pamatanho akasiyana. Iyo earloop ndeemachira akasununguka asina kurukwa, ayo anoita kuti nzeve dzeiye anotakura dzive dzakasununguka uye dzisina kushushikana. Iyo maski firita yejira jira ine yakanaka yekusefa mhedzisiro, iyo inokodzera zvakakwana kumeso kweAsia.
1.Inotora kugadzirwa kwakabatanidzwa, muchina wese otomatiki mashandiro, ari nyore uye anokurumidza, muchina uyu unongoda munhu mumwe chete kuti ashande.
2. Iyo idiki muhukuru uye haigare nzvimbo yakawanda. Inotora aluminium alloy chimiro, yakanaka uye yakasimba.
3. PLC kuronga chirongwa, yakakwira degree of otomatiki, kuona kwemagetsi zvigadzirwa, kudzivirira zvikanganiso, kudzora marara.
4. Yakashongedzerwa nemutyairi wepanyama, chikafu chakatsetseka uye hachina kuunyana, saizi yechigadzirwa ndeyechokwadi, majoini e solder akaisvonaka, zvakare akashongedzerwa neSMC cylinder, solenoid vharafu, titanium alloy mold, yakasimba uye yakasimba kushanda.
5. Iyo yose yekugadzira mutsara yakangwara kwazvo, iyo inogona kudzikisira zvakanyanya huwandu hweanoshanda. Iyo ine tekinoroji yepamusoro, inonzwisisika mamiriro, akavimbika mashandiro, nyore mashandiro uye yakakwira kugadzirwa kwekuita.
Iyo yakasununguka earloop mask inogadzira muchina inomhanya kwazvo uye inogadzirisa zvizere. Iyo yemukati neyekunze dura remasikisi inoitwa kune isina-yakarukwa machira, yepakati firita rukoko rweyakanyungudika yakaputirwa machira uye yakanyungudutswa yakadonhedzwa donje, yemhino zambuko rakasununguka zvinhu, saka chifukidzo chakasununguka kwazvo.
Mushini unogona kuburitsa 2 saizi yemasikisi, inokodzera vakuru nevana.
KN95 yekumhanya zvakakwana otomatiki kupeta chifukidzo yekugadzira mutsara. muchina uyu unodyisa iwo wese mupumburu, iine mutiple matanda asiri-rakarukwa machira mupumburu wemubatanidzwa, ine earloop yekucheka uye kuwina, iwo mairi rolls e earloop ari otomatiki asingazungunuke nekucheka, ipapo muviri wemask wakapetwa nehafu. Mushure mekunyorwa kweiyo ultrasonic uye kusangana, iyo maski inozopedzisira yakungurutswa uye fomu. Inogona kuwana isina-kumira, otomatiki, yakanyanya kugona kugadzirwa.
KN95 semiauto earloop yekutengesa muchina, iyo inotora ultrasonic kusungira elastic elastic earloop kumativi ese eKN95 mask. Mumwe chete anoshanda anodiwa kuti apedze kuita kwese kweyeloop.
Yekumhanyisa kumwe kudhonza imwe servo mota yemukati earloop otomatiki mask muchina, ndeye inoshanda kwazvo uye inoshanda mushe. Mushure memasikisi muviri wakagadzirwa mumask yekucheka muchina, iyo gungano servo yemukati earloop yekutengesa muchina iyo inogona otomatiki kupedzisa earloop yekutengesa, kunyanya inosanganisira mask yekuendesa bhandi, nzeve chiuno kudhonza mashandiro, iyo ultrasonic yekutengesa mashini, mask yekugamuchira mashini.
Yekumhanyisa kumhanyisa, kucheka uye kugadzira masiki muchina, inotora iyo ultrasonic tekinoroji kusungira 3 kusvika ku5 matete ePP isina kusukwa machira, kurongedza mhuno bhiriji, uye kucheka nzira yekubuda maski muviri.
Imwe yekudhonza imwe servo mota yekunze earloop otomatiki mask yekugadzira muchina
Yekumhanyisa kumwe kudhonza imwe servo mota yekunze earloop mask mask muchina unoshanda zvakanyanya uye unoshanda zvakanyanya modhi, yakabatana neyekutakura mutsara, kusanganisira mask yekugadzira muchina uye servo yekunze earloop yekutengesa muchina
Technical parameter Voltage 220V 50Hz Simba 17kw Mhepo kumanikidza 6kg / ㎝² Ultrasonic frequency 20KHz Kubuditsa ≧ 80pcs / min Chigadzirwa Raw zvinhu rack Mask yekucheka muchina, Earloop kudhonza mutsara, Ultrasonic Welding maching Detection nzira photoelectric kuona Kudzora nzira PLC Mushini saizi 4500 * 2400 * 2010mm Kurema 1000kg Mask saizi 175x95mm Kutarisirwa Zvinorambidzwa kubata iyo ultrasonic transducer ine yakakwira voltage. Iko kudhinda kuno ...
Iyo ultrasonic vibration system inogona kupa yakakwira-frequency vibration simba yeiyo yekuwacha epurasitiki kana chemakemikari fiber machira. Iyi sisitimu inoda kuve yakagadzirirwa kufamba kwekutenderera (chinzvimbo, kumanikidza) uye mamwe michina michina yekupedzisa iyo yekushambidza basa
Chinyorwa mashandiro earloop yekutengesa muchina, ndeye maviri mapoinzi ekumisikidza muchina, yakapusa, yakapusa, yakaderera mutengo, inongoda mumwe opareta.
Semiauto Earloop Welding muchina, wakabatanidzwa neanotakura mutsara, chiyeuchidzo chinodhonzera mashandiro, iyo ultrasonic yekutengesa mashini, mask yekugamuchira mashandiro. Mushure memasikisi muviri wakagadzirwa mumask yekucheka muchina, ipapo iyo maski muviri inoiswa mubhandi reye earloop yekutengesa muchina, inogona kupedzisa otomatiki yekutengesa earloop. Iyo dhizaini dhizaini yeiyi semiauto earloop yekutengesa muchina: yakapusa uye isinganetsi kushandisa, otomatiki kutenderera, yakagadzikana uye yakavimbika, ine kugona kuita kwakawanda, kuenderana, uye mutengo kuita.
Adress: Kwete. 39, Kechuang Road, Yakavanzika Sayenzi & Technology Park, Taihe Town, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong, China
© Copyright 2020: Kodzero dzose dzakachengetedzwa.